Rio Ferdinand oo kula taliyay Harry Kane inuu ka tago Tottenham, si uu ugu biiro…. – Gool FM
(Englnd) 20 Sebt 2019. Daafacii hore kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa aaminsan in Harry Kane ay fiicnaan laheyd inuu ka tago Tottenham Hotspur, isla markaana uu ku biiro koox weyn, si uu ugu guuleysto tartamo qurxin kara mustaqbalkiisa.
Kooxda reer London ee Tottenham Hotspur ayaan ku guuleysanin wax koob tan iyo markii uu macalin ka noqday tababaraha reer Argantina ee Mauricio Pochettino sanadkii 2014-kii.
Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxay gaartay finalka tartanka Champions League, laakiin nasiib daro waxaa kaga guuleysatay naadiga Liverpool.
Haddaba Rio Ferdinand ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Haddii aan joogi lahaa booska Harry Kane waan bixi lahaa, waxaana ku biiri lahaa koox kale, wuxuu xirfadiisa inta ugu badan ku qaatay maaliyada Tottenham”.
“Waxaa laga yaabaa inuu dhaawacmo, ama uu lumiyo qaab ciyaareedkiisa, isla markaana uu hoos u dhac ku yimaado, wuxuu doonayaa inuu hadda ku guuleysto koobab” ayuu hadalkiisa ku soo xiray halyeeyga reer England ee Rio Ferdinand.